सङ्खुवासभामा पर्यटनको सम्भावना र चुनौती
सङ्खुवासभाः पूर्वमा ताप्लेजुङ र तेह्रथुम, पश्चिममा सोलुखुम्बु र भोजपुर, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत अनि दक्षिणमा तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लाले घेरिएको छ सङ्खुवासभा । कुल क्षेत्रफल ३ हजार ४ सय ८० वर्गकिलोमिटर रहेको यस जिल्लामा ५ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेका छन् । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १ लाख ५८ हजार ७ सय ४२ जना यस जिल्लामा बसोबास गर्छन् ।
सङ्खुवासभालीले धरानदेखि ढाकरमा भारी त खेपे नै, यातायातको रहर गर्दै काँधमा बोकाएर गाडी नै भित्र्याए पनि । सडक सञ्जालमा नजोडिँदासम्म यहाँको पीडा साँच्चै बिर्सनलायक थियो । जिल्ला आफैँमा विकट, अझ आधा बढी क्षेत्र ओगट्ने उत्तरी क्षेत्र झनै विकट । यिनै विकटताका कारण यहाँको सास्ती र समस्या एकमात्र थिएन, अनेक थिए ।
अझै पनि दुर्गम नै भनिने सङ्खुवासभाले अब भने फड्को मार्दैछ । विकासनिर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता मानव विकास सूचाकाङ्कमा पनि सङ्खुवासभाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिरहेको छ । दिनानुदिन विकासका योजना अगाडि बढिरहेको सङ्खुवासभामा पर्यटन, जडीबुटी र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिने योजना÷आयोजनाका प्रशस्त सम्भावना छन् ।
यहाँ निर्माण हुन लागेको अरुण तेस्रो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा बुहचर्चित र बुहुप्रतिक्षित आयोजना हो । ९ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग सन् २००८ मै सम्झौता भइसकेको छ । अरुण तेश्रो सन् २०२० मा निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ । हाल धमाधम निमार्णकार्य भइरहेको छ ।
यससँगै माथिल्लो अरुणमा पनि विद्युत आयोजना निर्माण हुने चर्चा छ । भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुने यो आयोजनाले जिल्लावासीमा उत्साह थपेको छ । केही सयम अघि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाटविग साफेर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलगायतको टोलीले आयोजनाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको छ ।
त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र गौतम, प्रदेशसभाका सदस्यहरू पूर्णप्रसाद राई, पदमकुमारी गुरुङ र सरिता खड्का लगायत जिल्लाका उच्च अधिकारीको टोलीले पनि अनुगमन गरेको छ ।
भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको राजमार्ग पनि सङ्खुवासभा भएर निर्माणको क्रममा छ । जोगबनी–किमाथाङ्का राजमार्ग निर्माणको द्रुत गतिमा छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत हो ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनसँगका ९ नाका खोल्ने घोषणापछि यहाँको किमाथाङ्का एकाएक चर्चामा रह््यो । अरुभन्दा कम उचाइमा पर्ने भएकाले १२ महिना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने यो नाका खुले जिल्ला र पूर्वी नेपालले नै लाभ लिने निश्चित छ ।
विश्वको पाँचौ अग्लो मकालु हिमालसँग जोडिने पर्यटन यहाँको अर्को सम्भावना हो । मकालु आरोहण र यसको बेसक्याम्प भएर पदयात्रा गर्न हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउँछन् । पर्यटकमैत्री होटल तथा पूर्वाधारको अभाव र आवश्यक प्रचारप्रसार नहुँदा हिमाली पर्यटनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
सप्तकोशीको सबैभन्दा ठूलो सहायक नदी अरुणमा पनि पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ । ¥्याफ्टिङ तथा जेटबोट सञ्चालन हुन सके मनोरञ्जन र यातायात दुवै क्षेत्रमार्फत् फाइदा लिन सकिन्छ । यसका साथै, संसारकै होचो अरुण उपत्यका र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्यटनको अर्को केन्द्र हुन सक्छ । नेपालमा पाइने ३२ मध्ये २८ प्रजातिको गुराँस पाइने तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्र पनि यहीँ पर्छ । छिमेकी जिल्ला तेह्रथुम र ताप्लेजुङसँग जोडिएको तथा कोशी राजमार्गले छोएको यस क्षेत्रको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सके यो पूर्वकै पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्छ ।
सङ्खुवासभामा नै विश्वमा नपाइने विभिन्न प्रजातिका पुतली पाइन्छन् । अथाह पर्यटन विकासका लागि सम्भावना बोकेको सङ्खुवासभालाई नेपालकै सबैभन्दा बढी जङ्गल र बढी चराचुङगी भएको जिल्लामध्ये एक मानिन्छ । सङ्खुवासभा धेरै वन भएको नेपालको जिल्लाको सूचीमा छैटौं नम्बरमा रहेको र यहाँको करिब ४० प्रतिशत भूभाग वन जङ्गलले ओगटेको छ ।
समुद्री सतहदेखि ३ सय मिटरभन्दा माथि र ८ हजार मिटरसम्मको उचाइ यही जिल्लामा पाइन्छ । यो जिल्लामा हिमाली, पहाडी र तराई सबै भेगको हावापानी पाइने ठाउँ समेत रहेका छन् । सङ्खुवासभामा आयुर्वेद औषधिमा प्रयोग हुने १ सय ५४ प्रकारका रुख बिरुवा पाइने समेत अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ ।
जिल्लामा विभिन्न प्रकारका खनिजहरूको पनि प्रशस्त खानी रहको अध्ययनले देखाएको छ । टुर्मालिन, क्वार्ज, काइनाइड, अभ्रखलगायतका खनिजहरूको खानी रहेको प्रमाणित नै भइसके पनि त्यसको व्यावसायिक उत्खनन् भने अझै हुन सकेको छैन ।
धार्मिक पर्यटकका लागि पनि सङ्खुवासभा गन्तव्य हुन सक्छ । यहाँको सभापोखरी, वरुण दोभान, शिवधारा, सिद्धकाली, मनकामना, वालेश्वर गुफा, हुम्मुङदेवी, खेम्पालुङलगायत थुप्रै तीर्थस्थल प्रसिद्ध छन् । यी धार्मिक स्थल बेग्लाबेग्लै आस्था र विश्वास बोकेका शक्तिपीठ हुन् । यस्ता शक्तिपीठको उचित संरक्षण गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ ।
जिल्लामा भएका यस्ता शक्तिपीठहरूको हालसम्म अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । गोरखाको मनकामना भन्दा सङ्खुवासभाको मनकामना पहिले उत्पत्ति भएको भन्ने कथन भए तापनि यसको अध्ययन हुन सकेको छैन । भर्खरै मात्रै खाँदबारी नगरपालिकाले मनकामनाको विकासको लागि गुरुयोजना बनाउने कार्यको थालनी गरेको छ ।
अलैंची उत्पादनमा सङ्खुवासभा नेपालकै अग्रणीमध्येको जिल्ला हो । जिल्लामा रुद्राक्षको अरबौंको कारोबार हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त चिराइतो, अल्लो, यार्सागुम्बा, सतुवा सङ्कलनबाट यहाँका बासिन्दाले लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन् । सानाठूला १५ भन्दा बढी बैंक तथा लघुवित्तले जिल्लामा कारोबार गरिरहेको उदाहरणले पनि यहाँको आर्थिक चहलपहल प्रष्ट पार्छ ।
विकासको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि सङ्खुवासभामा विभिन्न प्रकारका चुनौती रहेका छन् । केन्द्रसम्म राजनीतिक पहुँच हुन नसकेको यहाँका बासिन्दाको मुख्य गुनासो रहिआएको छ । अल्लो, करुवा र अदुवालाई पनि यस जिल्लाको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिइँदै आएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार कृषि, ऊर्जा र पर्यटन हुन् । यसमा पनि पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभयुक्त क्षेत्र हो । यी ३ वटै कुरा सङ्खुवासभामा छ । सङ्खुवासभामा कृषिका लागि विभिन्न फाँटिला जमिन पनि प्रशस्तै छन् । त्यस्तै ऊर्जाको लागि जिल्लामा सम्भावना नभएको होइन ।
सङ्खुवासभा भएर बग्ने अरुण नदीमा मात्रै अहिले ५ वटा ऊर्जाका सम्भावना छनोट भएका छन, सर्भेको क्रममा छ । यसले सङ्खुवासभालाई मात्रै नभएर मुलुकलाई नै उज्यालो बनाउन सक्छ । त्यस्तै, पर्यटनमा पनि विभिन्न ठाउँ छन् । विश्वकै पाँचौँ अग्लो हिमाल मकालु, विश्वकै होचो उपत्यका अरुण उपत्यका, २८ प्रजातिका गुराँस, विभिन्न प्रजातिका पुतली आदि यहाँका पर्यटनका प्रमुख आकर्षक हुन् । सङ्खुवासभामा सयौँको सङ्ख्यामा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् ।
जिल्लामा रहेको बहुप्रतिक्षित आयोजना अरुण तेस्रोमा विविध समस्या आइरहेका छन् । निर्माण सामग्री ल्याउनको लागि राम्रो सडक मार्ग नहुनु यस आयोजनाको मुख्य चुनौती बनेको छ । त्यस्तै सो आयोजनालाई लक्षित गरी समयसमयमा हुने बम बिस्फोट पनि मुख्य चुनौती बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २ वर्षभित्रै किमाथाङ्कासम्म सडक मार्ग पु¥याउने घोषणा २ वर्ष अघि नै गरिदिए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । धमाधम सडकको ट्रयाक खोल्ने काम हँुदै गर्दा स्थानीयको जग्गा विवादले अहिले त्यो कार्य रोकिएको छ ।
उत्तरी क्षेत्रमा तिब्बतसँग सिमाना जोडिएकाले जिल्लाको सुरक्षा चुनौती पनि निकै महत्वपूर्ण छ । निर्माणाधीन कोशी राजमार्ग र खुल्न लागेको किमाथाङ्का नाकाका कारण यो क्षेत्र भएर हुने चोरीनिकासी तथा अवैध सामग्रीको तस्करी रोक्न सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती रहेको छ ।
अवैध रूपमा लैजान लागिएको दुर्लभ वन्यजन्तुको अङ्ग, जडीबुटीदेखि रक्तचन्दनसमेत प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको घटनाले सङ्खुवासभा जिल्ला तस्करीको ट्राञ्जिट हुन लागेकोप्रति प्रश्न तेर्सिएको छ ।
जिल्लाको आधा क्षेत्र ओगट्ने उत्तरी भेगको समग्र विकास पनि जिल्लाको चुनौती हो । सदरमुकाम खाँदबारी उत्तरका क्षेत्र यातायात, विद्युत, सञ्चार र सूचनाको सुविधाबाट अझै वञ्चित छन् । अलैंची, रुद्राक्षलगायतका जडीबुटीबाट अरबौं रुपैयाँ जिल्ला भित्रिने भए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
सो रकमले स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगधन्दा वा सानाठुला कारखाना सञ्चालन गर्न सके दीर्घकालीन लाभ लिन सकिनेतर्फ ध्यान नगएको उद्योगी व्यापारीले नै बताउने गरेका छन् ।
यस्ता चुनौतीको निवारण गर्न सके जिल्लाले अझ द्रुत गतिमा फड्को मार्ने निश्चित छ । तर सम्भावनाको विकास र चुनौतीको समाधानका लागि जिल्लामा कुनै स्पष्ट मार्गचित्र भने बनेको पाइँदैन ।
सर्वसाधारणले आरोप लगाउने सरकारी ढिलासुस्ती, उदासीनता र झण्झटिलो प्रक्रिया यहाँ पनि विद्यमान छ । विकास निर्माण तथा स्थानीय नीति निर्माणमा अनावश्यक भागबण्डा र राजनीतिकरण पनि समस्या हुन् ।
प्राकृतिक निधिको रूपमा प्राप्त सङ्खुवासभमा पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माण गर्न ठूलो मानवीय परिश्रम खर्च भएको छैन । सङ्खुवासभामा यस्ता थुप्रै स्थान छन्, जसका बारेमा स्वयम् सङ्खुवासभालीलाई पनि जानकारी छैन । पर्यटकीय स्थलका रूपमा हामीले केवल काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन, इलाम जस्ता सीमित स्थानलाई मात्र चिनेका छौं । सङ्खुवासभामा यीभन्दा धेरै सुन्दर र राम्रा ठाउँ पनि छन् । ओझेलमा परेका त्यस्ता स्थानको बारेमा खोजी हुनु जरुरी छ ।
यहाँ अलैंची, चिराइतो, पाँचऔले, कुड्की, जटामसी, पाखानवेद, सतुवा, लौठसल्ला, इन्द्रेणी, बिखम्मा, टिमुर, अमला, हर्रो, बर्रो, सुन्तला, कागती, अमिलो, अदुवा, जस्ता थुपै्र जडिबुटी पाइन्छन् । यी वस्तुको सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्न सकेमा यस क्षेत्रका जनताको आर्थिकस्तर माथि उक्सिनुका साथै यस क्षेत्रका धेरै मानिसले रोजगारी पाउने र विदेशिनु पर्ने बाध्यता हटी यहाँको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिर्वतन आउनेछ ।